Home News Maamul Goboleedyada oo shardi ku xiray iney wadahadal la furaan Madaxda Dowladda
Maamul Goboleedyada oo shardi ku xiray iney wadahadal la furaan Madaxda Dowladda
Guddigii aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah u xil saaray khilaafka dowladda federaalka ah iyo maamullada xubnaha ka ah ayaa soo saaray qoraal dheer oo inta badan ay xoogga ku saareen kaalinta hey’adaha dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada mid weliba uu leeyahay iyo sida ay muhiimka u tahay in la isku xushmeeyo adeegga cid weliba qaranka u heyso. Guddiga waxaa uu soo saaray go’aan qeyb ka ah xalka iyaga oo sidoo kale sheegay inay daba-socon-doonaa hirgelinta go’aanka.
Guddiga aqalka sare ee wada-xaajoodka xal-u-raadinta khilaafka u dhaxeeya xukuumadda DFS iyo DXDF waxaa ay soo gudbiyeen 8 cabasho oo ay ka mideysan yihiin dhammaan dowlad goboleedyada iyo 4 mid weliba gaar u dooneyso in wax laga qabto, kuwaas oo la doonayo inay wax ka qabato xukuumadda federaalka ah.
Cabashooyinka u gaar ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah
Puntland: Taageeridda ciidamada xoogga dalka(SNA), qeybta Puntland xagga mushaarooyinka, tababarrada iyo agabka.
Jubbaland: Taageeridda ciidamada daraawiishta ee Jubbaland, tayeytooda iyo kala howl-gelidda amniga guud ee Jubbaland.
Koonfur Galbeed: kala shaqeynta sugidda amniga gaar ahaan Muqdisho-Baydhabo.
Galmudug: La dhisidda ciidanka maamul Galamudug iyo la xoreynta dagaannada ay amni-darrida ku hayaan Al-shabaab
Ugu dambeyntii, Guddiga waxaa ay xukuumadda federaalka ah u soo-jeediyeen fulinta qodobada kor ku xusan, oo ah 8 qodob oo guud iyo 4 midba gooni u yahay maamul, oo ah nuxurka tabashooyinka
Guddiga waxaa uu sidoo kale go’aankiisa ku saleeyey heerka dowlad goboleedyada ay mas’uuliyadoodu tahay fulinta adeegyada dadka u baahanyihiin meelaha ka baxsan caasimadda iyo mas’uuliyadda dowladda dhexe ee “u taagnaanta iyo matalaadda qarannimada Soomaaliya.
sikastaba ha ahaatee waxaa la fahamsanyahay in madaxda dowladda aysan diyaar u aheeyn in ay heshiis la galaan maamul goboleedyada maadaama ay kasoo horjeedaan in dalka la horumariyo.
dhanka kale madaxda dalka diyaar uma aha in lala dagaalamo ururka al shabaab oo dhibaato ba’an ku haya guud ahaan dalka iyo shacabka soomaaliya.
Previous articlewafdi uu hogaaminayo Wakiilka Midowga Afrika ee Arrimaha Soomaaliya oo gaaray Magaalada Baydhabo
Next articleFarmajo oo la bilaabay in dadka laga celiyo Bal arag waxa Xalay ka dhacay Nayrobi.
Madaxda Sare Ee Dalka oo Cabsi ka qabo Shir Kismaayo ka...